ခဈြခငျပှနျးနဲ့သားလေးကို လှမျး နတောကွောငျ့ Video Call ချေါကာ အလှမျးသညျနတေဲ့အိန်ဒွာကြျော ဇငျ – XB Media Myanmar
ခဈြခငျပှနျးနဲ့သားလေးကို လှမျး နတောကွောငျ့ Video Call ချေါကာ အလှမျးသညျနတေဲ့အိန်ဒွာကြျော ဇငျ
February 11, 2020 Bestie_Author
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ သစ်စာရှိရှိခဈြခငျကွပွီး ကွညျနူးပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖနျတီးတညျဆောကျထားသူတှကေတော့ နာမညျကွီး သရုပျဆောငျ ပွတေီဦးနဲ့ အိန်ဒွာကြျောဇငျတို့ဇနီးမောငျနှံ ပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးဟာ အနုပညာလော က မှာလညျး ဆယျစုနှဈတှမြေားစှာတိုငျအောငျ အောငျမွငျမှုတှရေရှိထားတဲ့ အနုပညာ ရှငျစုံတှဲလေးဘဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှကေလညျး သူတို့နှဈဦးလုံးကို တဈခဲနကျ အား ပေးခဈြခငျနကွေတာပါ။
အူဝဲတို့ဇနီးမောငျနှံဟာ . သားသမီးတှအေပျေါမှာလညျး လိုလသေေးမရှိအောငျ ပွုစုစောငျ့ ရှောကျသူတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ . အားလပျခြိနျတိုငျးကိုလညျး ကလေးတှနေဲ့အတူ အခြိနျကု နျဆုံးလရှေိ့တာပါ။. လတျတလောမှာတော့ အူဝဲတဈယောကျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးရို ကျကူးရနျ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ. ဘာလီမွို့ကို ရောကျရှိနတောပဲ. ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျကလညျး အူဝဲရဲ့ Facebook Myday လေးမှာ ပုံလေးတဈပုံတငျထားတာပါ။ ဒါကတော့ ခဈြခငျပှနျးနဲ့သားလေးကို လှမျးနတောကွောငျ့ Video Call ချေါကာ အလှမျး သညျ နတေဲ့ အိန်ဒွာကြျောဇငျရဲ့ ပုံရိပျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီပုံလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော။
Source – Eaindra Kyaw Zin,CRD-Myanmarload
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သစ္စာရှိရှိချစ်ခင်ကြပြီး ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသား စုဘဝလေးကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားသူတွေကတော့ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ဇနီးမောင်နှံ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ အနုပညာလော က မှာလည်း ဆယ်စုနှစ်တွေများစွာတိုင်အောင် အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ အနုပညာ ရှင်စုံတွဲလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့နှစ်ဦးလုံးကို တစ်ခဲနက် အား ပေးချစ်ခင်နေ ကြ တာပါ။
အူဝဲတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ . သားသမီးတွေအပေါ်မှာလည်း လိုလေသေးမရှိအောင် ပြုစုစောင့် ရှော က်သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ . အားလပ်ချိန်တိုင်းကိုလည်း ကလေးတွေနဲ့အတူ အချိန်ကု န်ဆုံးေ လ့ရှိတာပါ။. လတ်တလောမှာတော့ အူဝဲတစ်ယောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရို က်ကူးရန် အင် ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ. ဘာလီမြို့ကို ရောက်ရှိနေတာပဲ. ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကလည်း အူဝဲရဲ့ Facebook Myday လေးမှာ ပုံလေးတစ်ပုံတင်ထားတာပါ။ ဒါကတော့ ချစ်ခင်ပွန်းနဲ့သားလေးကို လွမ်းနေတာကြောင့် Video Call ခေါ်ကာ အလွမ်း သည် နေတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီပုံလေးကို တင်ဆ က်ေ ပးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဘယ်ဘက်နံရိုး မှာတော့ ကင်ဆာ အ စက်လေးတွေ အနည်းငယ်ထပ်ေ တွ့ တယ် ဆိုတဲ့ မီးမီးခဲ
ချစ်သူများနေ့အတွက် အထူးပရိုမို ရှင်းရပါလို့ဆိုတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ ရဲ့ အသဲကျော် တိုင်ရွန်နဲ့ထူးအောင်